Schweinsteiger oo lagu qabsay inuu tababarka la qaato kooxda keydka Man United iyo laacibka oo… – Gool FM
Schweinsteiger oo lagu qabsay inuu tababarka la qaato kooxda keydka Man United iyo laacibka oo…
Byare August 1, 2016
(Manchester) 01 Agoosto 2016. Jose Mourinho ayaa la warinayaa inuu Bastian Schweinsteiger ku qasbay inuu tababarka la sameeyo safka labaad ee Man United kaddib markii laacibka reer Germany lagu war galiyay inuu ka tagi karayo Old Trafford sida ay qoreyso Daily Mail.
Wararka ayaa sheegaya in 32-jirkan uu alaabtiisa ka soo rartay qolka dher badelashada safka hore ee kooxda isagoona u soo guuray qolka dher badelashada yaryarka Man United.
Schweinsteiger waxaa uga harsan heshiiska uu Red Devils kula joogo labo sanadood waxaana la arkaa in Man United ku qasbanaato inay qeyb ka bixiso mushaarkiisa qaaliga ah haddii uu ku biiro koox aan bixin karin heshiiskiisa iminka.
Laacibka reer Germany ayaa ku soo biiray kooxda ka arrimisa Old Trafford kal ciyaareedkii la soo dhaafay laakiin wuxuu ku dhibtooday inuu qaab ciyaareed fiiican helo intii uu kooxda joogay Louis va Gaal waxaana xilli ciyaareedkiisa carqaladeeyay dhaawacyo.
Arsenal oo bartilmaameedsaneysa daafac u dheela Torino
Juventus oo sare u qaaday qiimaha ay ku dooneyso Axel Witsel laakiin…